Guriga runta ah ee Ilaah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Markii masjidka "Notre Dame" lagu gubay Paris, waxaa jiray murugo weyn oo keliya maahan Faransiiska, laakiin sidoo kale Yurub oo dhan iyo adduunka intiisa kale. Alaabada aan la qiyaasi karin waxay ku burbureen holac. Markhaatiyaasha taariikh 900 sano ah ayaa lagu kala diray qiiq iyo dambas.
Qaar baa isweydiinaya in tani ay calaamad digniin u tahay bulshadeenna maxaa yeelay waxa dhacay kaliya inta lagu jiro Toddobaadka Quduuska? Yurub gudaheeda, meelaha cibaadada iyo "dhaxalka masiixiga" waa kuwo aad u yar oo qiimo yar oo inta badan xitaa ku tuman.
Maxaad u malaynaysaa markaad ka hadlayso meel lagu cibaado tago? Ma tahay cathedral, kaniisad ama dukaan yar, hool qurxin ama meel qurxoon oo dabiici ah? Bilowgii howshiisa, Ciise wuxuu soo saaray bayaan ku saabsan waxa uu u maleeyo "guryaha Ilaah". Muddo yar ka hor wakhtiga Kormaridda, ayuu eryayayaashii ka eryay macbudka oo uga digay inaysan macbudka u noqonin bakhaar waaxeed. Sidaa aawadeed Yuhuuddu waa u jawaabtay oo ku tidhi isaga, Calaamadee baad na tusaysaa inaad waxan uaysid? Ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi, Macbudkan dumiya, oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa. Yuhuuddu waxay dhaheen: Macbudkan waxaa la dhisay 46 sano, oo ma waxaad rabtaa inaad saddex maalmood ku dhisto? »(Yoh 2,18: 20-21). Muxuu Ciise ka hadlayaa? Yuhuudda, jawaabtiisu waxay ahayd mid jahwareer badan. Aynu sii wadno akhrinta: «Laakiin wuxuu ka hadlay macbudka jidhkiisa. Markuu kuwii dhintay ka soo sara kacay, ayaa xertiisii ​​u maleeyeen inuu sidan ku hadlay, wayna rumaysteen Qorniinka iyo hadalkii Ciise ku hadlay (Aayadaha 22-XNUMX).
Maydka Ciise wuxuu noqon lahaa guriga dhabta ah ee Ilaah. Oo saddex maalmood buu qabriga ku jiray dabadeed maydkiisii ​​waa la dhisay. Wuxuu helay jidh cusub xagga Ilaah. Bawlos wuxuu qoray in innagu, innagoo ah carruurtii Ilaah aynaan xubin ka nahay jidhkan. Waraaqdiisii ​​ugu horeysay, Butros wuxuu ku qoray inay tahay inaan dhagxanno gurigan ruuxiga ah looga dhex dhisay isagoo nool.
Meeshan cusub ee cibaadada ayaa aad uga qiimo badan dhisme kasta oo qurux badan oo waxa gaarka ah ee ku saabsanna ay tahay in aan la burburin karin! Ilaahay wuxuu diyaariyey “barnaamij dhisme” weyn oo soconaya qarniyo badan. Sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidin shisheeyayaal iyo shisheeyayaal, laakiinse waxaad tihiin shisheeyayaal quduusiin ah iyo saaxiibbadiis oo Ilaah ahu, waxaad ku dhiseen rasuullada iyo nebiyada, maxaa yeelay, Ciise Masiix ayaa ah dhagaxa weyn ee dhismaha oo dhan lagu dhisay, oo isku dhisa macbudka quduuska ah ee Rabbiga. Isaga isagana waxaa laydinka dhex dhisi doonaa rugta Ilaah xagga Ruuxa, (Efesos 2,19-22). Dhisme kasta oo dhisme ah ayuu Ilaah doortay, isagaa u diyaariya si ay ugu habboon tahay jawiga loogu talagalay. Dhagax kastaa wuxuu leeyahay howshiisa gaarka ah iyo shaqadiisa! Marka dhagax kasta oo jirkan ku jira waa mid aad u qiimo badan oo qaali ah!
Markii Ciise u dhintay iskutallaabta dusheeda kadibna la dhigay qabrigii, waqti aad u adag ayaa xertii ku bilaabatay. Waa maxay tallaabada xigta? Rajadayadu ma waxay ahayd mid aan waxtar lahayn? Shaki ayaa ku faafay iyo niyad jab, in kastoo Ciise uu dhowr jeer ku wargeliyay dhimashadiisa. Ka dibna raaxada weyn: Ciise wuu nool yahay, wuu kacay. Ciise wuxuu is tusaa jidhkiisa cusub marar badan, sidaa darteed shaki kuma jiri karo. Xertii waxay noqdeen markhaatiyaal goob joog u ahaa sarakicidda Ciise oo wacdiyey cafis iyo cusbooneysiinta Ruuxa Ilaah. Meydkii Ciise wuxuu dhulka ku yimid qaab cusub.
Ruuxa Ilaah wuxuu sameeyaa dhismeyaal shaqsiyadeed oo Eebbe ugu yeero guriga cusub ee ruuxiga ah ee Ilaah. Gurigana weli wuu sii kordhayaa. Oo sida uu Ilaah wiilkiisa u jeclaado, isna wuxuu jecel yahay dhagax kasta. "Adiguna, sida dhagxan nool oo kale, naftaada u dhisi guriga ruuxiga ah iyo wadaaddada quduuska ah, inaad ku allabaryo allabaryo ruuxi ah oo Ilaah ka farxiya xagga Ciise Masiix. Sidaa darteed waxaa loo qoray, "Bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigay dhagax weyn oo la doortay oo qaali ah, Oo ku alla kii rumaystaa ma ceeboobi doono." Hada kuwa rumeeysan, waa qaali. Laakiin kuwa aan rumeysnayn, waa "dhagaxii ay kuwii wax dhisayay u diideen; waxay noqotay dhagaxii geeska" (1 Butros 2,5: 7-XNUMX).
Ciise wuu kugu cusbooneysiiyaa maalin walba jacaylkiisa, si aad ugu habboonaan dhismahan cusub ee loogu talagalay ammaanta Ilaah. Hadda waxaad arki doontaa waxa hoos ooga jiri doona, laakiin ugu dhakhsaha badan waxaad arki doontaa weynaanta buuxda ee xaqiiqada markii Ciise ku yimaado sharaftiisa oo dunida u soo bandhigi doono guriga cusub ee Ilaah.